အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား စာချုပ်တစ်ခုလို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား စာချုပ်တစ်ခုလို
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား စာချုပ်တစ်ခုလို
Posted by etone on May 28, 2012 in Community & Society, Critic, My Dear Diary | 29 comments
etone ဘ၀ တစိတ္တပိုင္း သမာသမတ္က်တဲ့ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ဖို႕အေရး
ဒီလပိုင်းအတွင်း ရုံးတက်တိုင်း မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းကတွေ့နေကြဖြစ်နေပေမယ့် ။ ကျွန်မအတွက်တော့ မြင်လေတိုင်း အမည်မသိတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုခု ဖြစ်နေသလိုပါပဲ ။ ကားဖြတ်သွားတိုင်းတွေ့နေရတဲ့ သူတို့မျက်နှာတွေမှာ မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့ ။စိုးရိမ်မှုတွေရောယှက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေထဲ သောကတွေလည်း တစွန်းတစနဲ့ ။ နေပူမရှောင် ၊ မိုးရွာမရှောင် ပိတ်ထားတဲ့ စက်ရုံတံခါးဝအနီး ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု ရပ်သူကလည်းရပ် ၊ ဖိနပ်လေးတွေင် ဖင်ခုထိုင်လျက်စောင့်သူကလည်းစောင့်နဲ့မမောနိုင် မပမ်းနိုင်အောင်ပါပဲ ။ အားလုံးရဲ့ အကြည့်ကတော့ စက်ရုံဘက်ဆီက ပိတ်ထားတဲ့ သံတခါးဆီကိုပါ ။ တစ်ခုခုကို စောင့်စားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခြင်းဆိုတာ ကျွန်မရိပ်မိခဲ့ပါတယ် ။
ယခုနှစ်များအတွင်း စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် ဆန္ဒပြခြင်းသည် အတော်ပင်ခေတ်စားနေခဲ့ပါတယ်။ စက်ရုံအများပြားတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလို့တောင် သတ်မှတ်လို့ ရတယ် ။ အရင်ကတော့ ဆန္ဒပြတယ်လို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ဆူပူအော်ဟစ်သောင်းကျန်းမယ် ၊ ကြွေးကျော်တောင်းဆိုတာတွေ မြင်ခဲ့ဖူးလို့ ကျွန်မတို့ စက်ရုံ ဆန္ဒပြတုန်းက ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ နောက်တော့ကိုယ်တိုင်နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့မြင်တော့မှ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ အလုပ်မလုပ်ပဲ စက်ရုံအပြင် ၊ စက်ရုံဝန်းအတွင်းထွက်ရပ်/ထိုင်ခြင်းပါလားလို့ သိရတော့တယ် ။ ဆန္ဒပြမှုအများစုရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကတော့ လုပ်ခ ၊ လစာကြောင့်ဖြစ်တာများတယ် ။ ဒါ့ပြင် အချိန်ပိုဆင်းရတာများတာမျိုး ပိတ်ရက်နည်းတာမျိုးတွေနဲ့ အခြားသော တောင်းဆိုချက်အနည်းငယ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ် ။
ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး ။ အလုပ်သမားအချင်းချင်း ကြိုတင်ညှိနှိုင်းရပါတယ် ။ ဦးဆောင်မယ့်လူရှိရပါတယ် ။ တောင်းဆိုမယ့်အချက်တွေနဲ့ ဆန္ဒပြမယ့်အချိန်ကို ကြိုတိုက်ထားကြပါတယ် ။တစ်ခါတစ်လေ ဆန္ဒပြမယ်သတင်းကြားပေမယ့် လူမညီလို့ ၊ ဦးဆောင်မယ့်လူမရှိလို့ စသဖြင့် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမဖြစ်မြောက်လိုက်တာမျိုးတွေလည်း ကြားခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒါက အရင်ကအခြေနေပါ ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုလျှင် ကြိုပြီးအကြောင်းကြားရတာမျိုး ၊ ပါဝင်မယ့်လူဦးရေအသိပေးရတာမျိုး၊ အချိန်ကိုကြိုပြီး အသိပေးရတာမျိုးလုပ်ရသတဲ့ ။ ကဲပါလေ ဆန္ဒပြပြီဆိုကတည်းကတော့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုသော်လည်းကောင်း ၊ လိုအပ်ချက်များကိုသော်လည်းကောင်း တောင်းဆိုတာပေါ့လေ ။တစ်ခုခုအဆင်မပြေလို့ ဆန္ဒပြတဲ့အခါ စက်ရုံပိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေ အတော်ခေါင်းကြီးရပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားသားပိုင်စက်ရုံတွေဆိုပေမယ့် စာရွက်စာတမ်းအရကိုက နိုင်ငံသားပိုင်တွေချည်းဆိုတော့ ၊ သက်ဆိုင်သူတွေ စိတ်ပူရပြီပေါ့ ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးက အလုပ်သမားတွေအပေါ် အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နည်းမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေမယ့်နည်းကို သူတို့တောင်းဆိုချက်ပေါ်မူတည်ပြီးရွေးရပါတယ် ။ အလုပ်မလုပ်ပဲ အပြင်ထွက်နေတဲ့အခါ ၊ စက်ရုံဘက်က အရင်ဆုံး နစ်နာပါပြီ ၊ ဂျန်နရေတာမောင်းထားတာတွေ ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုတွေ ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစက်ယန္တရားလည်ပတ်မှုတွေက အလုပ်သမားမရှိပဲ ပါဝါတွေဖွင့်ထားတာကြောင့် အလေလွင့်စဖြစ်ရပြီပေါ့ ။ ဒီလိုပါပဲ အလုပ်သမားအရေးမို့ ပါးနပ်စွာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါ တာဝန်ရှိတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ဖြေရှင်းရတာတွေ ၊ဆွေးနွေးရတာတွေလုပ်ရတော့မယ် ဒီတော့ ပိုပြီး အလုပ်ရှုပ်အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့လေ ။ ဒါကြောင့်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ကျွန်မတို့စက်ရုံကတော့ ဆန္ဒပြမှုမဖြစ်အောင် အလုပ်သမားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ညှိနှိုင်းပြီး ဆွေးနွေးပေးတာမျိုးလုပ်ပါတယ် ။ သူများစက်ရုံမှာ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ အသံကြားကတည်းက ထိုက်သင့်တဲ့ လုပ်အားခနဲ့ ပိတ်ရက်မျိုးတိုးပေးခြင်းအားဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါတယ် ။
လူတိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားဘဝမှာ လိုအပ်ချက်ဆိုတာ ပိုလို့တောင်များပါသေးတယ် ။ စာဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတာ မလွယ်ပါဘူး ။ နေ့စားသမားတွေဆို တစ်ရက်လုပ်ပြီး ပြန်လာမှ ဝယ်ခြမ်းစားသောက်ရတာမျိုးလည်း မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လုပ်အားခ ပိုလိုချင်တယ် ၊ ပိုတောင်းဆိုချင်တယ် ဒါက သဘာဝပါ ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း သူများအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်သမားမို့ တစ်ကျပ်ဖိုးလောက်ပဲ လုပ်နိုင်ပြီး တစ်သိန်းဖိုးလောက်လိုချင်စိတ်ရှိသူမျိုးပါ ။ အလုပ်ရှင်ကတော့ နည်းနည်းပေးရလေ ၊ သူ့အတွက်ကျန်လေပေါ့ ။ အလုပ်သမားကတော့ များများရဖို့သာ အဓိကပေါ့ ။ ဒါကြောင့် အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား မကျေလည်မှုလေးတွေ ၊ ကတောက်ကဆဖြစ်တာလေးတွေ ကြုံရတတ်တယ် ။ ဒီလိုမပြေလည်မှုတွေ၊ ခံစားချက်တူသူချင်း ပြောမိတဲ့အခါ ဆန္ဒပွဲလေးလုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးလာတယ် ။ ဆန္ဒပြပြီဆိုကတည်းက စက်ရုံပိုင်းက အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်လျောပေးတာများတယ် ။ ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်မှာ အချိန်ကြန့်ကြာမှု မရှိစေချင်တဲ့အတွက်ပါ ။ အရမ်းကို လည်ပတ်မှုအားကောင်းတဲ့ အလုပ်မျိုးဆိုလျှင်တော့ အလုပ်သမားတွေတောင်းဆိုချက်အတိုင်းပေးလို့ ရပေမယ့် တစ်ချို့သော လည်ပတ်မှု အားသိပ်မကောင်းတဲ့ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုမျိုးဆိုလျှင်တော့ ၊ အလုပ်သမားတွေကို လစာတိုးဖို့ဆိုတာမျိုး မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ။ ဒီအချိန်မှာ စက်ရုံဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေကအလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား ၊ ကြားဝင်ဖြေရှင်းရတာမျိုးလည်း လုပ်ကြရပါတယ် ။ တစ်ချို့သော စက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်သမားမို့ ၊ အလုပ်သမားတွေဘက်ကနေမျှမျှတတထားပြီး ကူညီစဉ်းစား ညှိနှိုင်းပေးပေမယ့် သခင်းအားရအောင် ကျွန်ပါးဝနေတဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ချို့ကတော့ အလုပ်သမားတွေအပေါ် ပြေလည်အောင်မညှိပေးပဲ ။ နစ်နာကြေးယူ စက်ရုံယာယီရပ်ဆိုင်းဖို့ကိုသာ စိတ်ထက်သန်ကြတယ် ။
တောင်းဆိုချက်ဆိုတိုင်းလည်း တကယ်လိုအပ်လို့တောင်းဆိုတာနဲ့ ၊ မလိုအပ်ပဲ သူများတကာတွေ တောင်းဆိုလို့ လိုက်လုပ်တာဆိုတာမျိုးလည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဥပမာပေါ့လေ အလုပ်သမားတွေကို ညနေခြောက်နာရီမှ ပြန်ရမယ်ဆို အစာပြေ ပေါင်မုန်တစ်လုံးစီပေးတယ် ။ ဒီတော့ သူတို့ဘက်က ကွန်ပလိန်းတက်တယ် ကျွေးတယ်ပေါင်မုန့်က ညံ့တယ်ပြောင်းကျွေးပါပေါ့ ။ သူတို့လည်းကောင်းကောင်းစားချင်ရှာမယ် ။ဈေးနှုန်းနည်းနည်းကွာသွားပေမယ့် ပိုစားကောင်းမယ့်မုန့်မျိုးပြောင်းခဲ့တယ် ၊ ဒီလောက်ထိ လက်ခံနိုင်ပါတယ် ။နောက်ပိုင်းသိပ်မကြာခင် ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုလျှင် ပေါင်မုန့်ကိုမစားတော့ပဲ ပေါင်မုန့်ဖိုးကို ပေးပါဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ် ။ ဒီတော့မှ ယခင်က ပေါင်မုန့်စားမကောင်းဘူး ပိုကောင်းတာကျွေးပါပြောခဲ့တာ ၊ ပိုများတဲ့ပေါင်မုန့် ဖိုးလိုချင်လို့ ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြင်လာကြတော့တယ် ။ ဆိုလိုတာက တောင်းဆိုတဲ့အချက်တိုင်းတော့ မဖြစ်မနေကြီး လိုအပ်လို့တောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ ။
နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်းရှင်တွေ(နိုင်ငံသားပိုင်အမည်ခံပြီး) ဒီမှာ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ လာလုပ်တယ် ။ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်တာမှန်ပေမယ့် ၊ တစ်ဖက်တလမ်းကကြည့်လျှင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံက အလုပ်လက်မဲ့တွေ အလုပ်ရကြတယ် ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးရမယ်ပေါ့ ။ ဒါကကောင်းတဲ့အချက်ပါ ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ခွင်ဝင်ပြီးမှ နားလှည့်ပါးရိုက်တာမျိုး ခဏခဏာကြားနေရလို့ ဘယ်သူက မှန် ၊ ဘယ်သူကမှား မဝေခွဲတတ်အောင်ပါပဲ ။ နှစ်ဖက်စလုံးသော်လည်းကောင်း ၊ တစ်ဖက်ဖက်သော်လည်းကောင်း ချို့ယွင်းချက်တွေရှိလို့ အဆင်မပြေတာမျိုးကြုံရတာ အဲ့ဒီအချိန်မှထပြီးတောင်းဆိုတာတွေ ဆန္ဒပြတာတွေ လိုက်လျောတာတွေ ၊ မလိုက်လျောတာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ ။
ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့တွေ အလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့အခါ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စာချုပ်တစ်ခု ရှိသင့်ပါတယ် ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရှိတယ်လို့ တော့ကြားဖူးတယ် ။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ သမန်ကာလျှံကာ စည်းကမ်းချက်လိုစာရွက်လေး အလုပ်ရှင်ဘက်ကရေးတာမျိုးတော့တွေ့ဖူးပါတယ် ။ သူရေးချင်တာတွေရေးပြီး အလုပ်သမားက ဖတ်ပြီး လက်မှတ်ထိုးရတာပါ ။ အလုပ်ရှင်ဘက်ကအသေရေးပြီး ပရင့်ထုတ်ထားမျိုးမို့ အလုပ်သမားအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ခွင့်စွက်ဖက်ခွင့် တောင်းဆိုခွင့်တွေ ထည့်သွင်းလို့ မရတာမျိုးပါ ။ ဖြစ်သင့်တာက အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား နှစ်ဖက်ကြား စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ အလုပ်မဝင်ခင် အပြန်လှန်ဆွေးနွေးထားတာတွေကို စာချုပ်အနေနဲ့ ချုပ်ပြီး အလုပ်ခန့်၊အလုပ်ဝင်သင့်ပါတယ် ။ ခြောက်လတစ်ခါ လခအကြမ်းပျှမ်းဘယ်လောက်တိုးတာမျိုး ၊ အိုဗာတိုင်းမ်းအများဆုံးဆင်းချိန်ဘယ်လိုမျိုး ၊ ခံစားခွင့်က ဘယ်လိုမျိုး စသဖြင့်ပေါ့လေ ၊ ရှိသင့်ပါတယ် ။ မဟုတ်လျှင် တစ်ချို့သော စိတ်ဓါတ်နိမ့်သူ အလုပ်ရှင်များက လိုတုန်းကတော့သုုုံးပြီး မလိုတဲ့အခါ အကြောင်းပြချက်ရှာပြီး လျှော်ကြေးမပေးပဲ ကန်ထုတ်တာမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ် ။ အလုပ်သမားတိုင်း အလုပ်ဝင်တဲ့အခါ အလုပ်ရှင်နဲ့ ညှိနှိုင်းစာချုပ်ချုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးမျိုးရှိသင့်ပါတယ် ။လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေစဉ်အတွင်းလည်း စာချုပ်စည်းမျဉ်းအရ ဘောင်အတွင်းက အပြန်လှန်ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ခွင့်ရှိရပါမယ် ။ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ၊ ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်လည်း ဘောင်အတွင်းကရှိရပါမယ် ဒါမှသာ မတရားဖိနှိပ်ခိုင်းစေခံရခြင်းနဲ့ ဆန္ဒပြခြင်းကိုကာကွယ်ကောင်း ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း အဲ့ဒီအချက်ပေါ် ဖိအားပေးလုပ်ဆောင် ၊ စစ်ဆေးတာမျိုး ၊ အကြံပြုချက်ပေးတာမျိုးတွေလည်း လုပ်သင့်ပြီး ၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘဝကို ကာကွယ် ၊ မြင့်တင်ပေးဖို့ မျှော်လင့်မိပါတော့တယ် ။ ။
ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့တွေ အလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့အခါ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စာချုပ်တစ်ခု ရှိသင့်ပါတယ် ။
ကောင်း လိုက်တဲ့ အကြံ ပြု ချက်ပါ
အလုပ် သမားဆိုတဲ့ လူတန်းစား က အားနည်းသူတွေပါ
အားပေး သွားပါတယ် ဆရာမရေ
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားစာချုပ်တစ်ခုချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်…
Employment Contract လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ကြားချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကိစ္စပြောကြမယ်ဆိုရင်ဗျာ…
ဆောင်းပါးရှင်အိတုန်းက ဘူဇွာကြောင်ဝတုတ်ဆီမှာ အလုပ်လာလျှောက်ပါတယ်…
အိတုန်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အရည်အချင်းကြောင့် ဘူဇွာကြောင်ဝတုတ်က အလုပ်ခန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်…
လစာညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်တယ်… အိတုန်းကို ဘူဇွာကြောင်ဝတုတ်က အလုပ်ခန့်လိုက်ပါတယ်…
အလုပ်ခန့်တာနဲ့ A4 စာရွက်ပေါ်မှာ သို့တည်းမဟုတ် နိုင်ငံတော်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားသော အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းပေါ်မှာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးခံစားသင့်ခံစားထိုက်တဲ့ လစာ၊ နှစ်တိုးနဲ့ အခြားအခြားသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို သဘောတူကြောင်းနှစ်ဦး နှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါတယ်…
ဒါဆိုရင် အိတုန်းလိုချင်တဲ့ စာချုပ်လေးတစ်ခုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်…
တကယ်များ အဲဒီစာချုပ်ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့အချက်တွေကို ဘူဇွာကြောင်ဝတုတ်ဖောက်ဖျက်ရင် အလုပ်သမားဖြစ်သူအိတုန်းမှ
အလုပ်သမားဥပဒေနဲ့အညီ အလုပ်သမားဦးစီးဌာနကို တိုင်ကြားပြီး ရသင့်သော့အခွင့်အရေးအတွက်တောင်းဆိုမယ်…
ဟုတ်ပါပြီ… ကျွန်တော်သာ ဘူဇွာကြောင်ဝတုတ်ဖြစ်ရင်… အဲဒီလိုစာချုပ်မျိုးကို ၅၀၀ဝ လောက်တန်တဲ့ အစိုးရအခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးပါတယ်… အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ လုံခြုံမှုဆိုတာလေးကိုပေးပြီး ကောင်းကောင်းခိုင်းစားပါ့မယ်…
ဒါပေမယ့် အချိန်တန်လို့ပေးစရာရှိတာကို ပေးချင်မှပေးမယ်… အလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အိတုန်း ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ…
ဘာဖြစ်လို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်တာလဲလို့ပြောရရင် အချက်(၂)ချက်ကြောင့်ပါ…
ပထမတစ်ချက်က ငွေရှင်မို့ မသန့်တစ်သန့်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို ငွေနဲ့ပေါက်ရှင်းနိုင်ပါတယ်…
အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ အဲဒီလိုမရှင်းတာ အကြောင်းရှိပါတယ်… လူအရမ်းများလို့ လူသိထင်ရှားဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းတွေပါ…
အထည်ချုပ်မဟုတ်ပဲတခြားရိုးရိုးရုံးဝန်ထမ်းများဆိုရင် HR issue အရ၊ အလုပ်မထုတ်ပဲ ထွက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပါ့မယ်…
အပြစ်မရှိပဲအလုပ်ထုတ်ရင် (၃)လစာပေးရမှာဖြစ်လို့၊ တစ်ပြားမှမပေးပဲထုတ်ချင်ရင် အရေးမကြီးတဲ့အလုပ်တွေခိုင်းပြီး စိတ်ဆင်းရဲအောင်ထားလိုက်တာက မြန်မြန်အလုပ်ထွက်သွားအောင်လုပ်နည်းပါ… အဲဒီအတွက် အလုပ်သမားတွေ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး….
နံပါတ်(၂)ကတော့ အလုပ်သမားတွေဘက်က ကိုယ့်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ကို လုပ်မထားတာပါပဲ…
အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံသားတိုင်း အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ရှိရပါတယ်… ရန်ကင်းမှာသွားလုပ်ရတဲ့ Labour Registration ပေါ့…
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်အလုပ်လိုချင်တုန်းက သွားလုပ်ပါတယ်….
အလုပ်ခေါ်ရင်တွဲတင်ပေးရတာမို့ပါ… အလုပ်ထွက်ပြီး နောက်အလုပ်တစ်ခုလျှောက်ရင် ထပ်သွားယူပါတယ်…
ရန်ကင်းကလဲ လုပ်ပေးတယ်… ဘယ်နှစ်ခါသွားသွားပေါ့…
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလဲ သေချာနားမလည်… အဲဒီရုံးက ဝန်ထမ်းတွေကလဲဘယ်တုန်းကမှ ရှင်းမပြပါဘူး…
အဲဒါဆို အဲဒီစာရွက်ပိုင်းလေးက ဘာလုပ်ဖို့တုန်း…
အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်လို့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့ အလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်…
အဲဒီအခါမှာ အဲဒီစာရွက်ပိုင်းလေးရတယ်… အဲဒီစာရွက်လေးကိုကိုင်ပြီးအလုပ်လျှောက်ရတယ်…
အလုပ်ရတဲ့အခါမှာ ဘယ်နေရာမှာအလုပ်ရတဲ့အကြောင်း၊ ဘယ်ရာထူးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းကို အလုပ်လုပ်သူဘက်မှ
ပြန်ပြီးအကြောင်းကြားပေးရပါမယ်… ဒါမှသူတို့က သင်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်… လစာဘယ်လောက်နဲ့လုပ်သလဲ… ဘယ်လိုခံစားခွင့်တွေရှိသလဲဆိုတာကို အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး စာရင်းပြုစုရမှာပါ… အဲဒီလိုပဲရာထူးတက်ရင်လဲ ရာထူးတက်တဲ့အကြောင်း အလုပ်သမားဘက်မှ အကြောင်းကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်…
အဲဒီ စာရင်းတွေက ဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲဆိုရင် အချိန် (၂)ချိန်မှာသုံးပါတယ်…
အစိုးရက ဝင်ငွေခွန်ကောက်တဲ့အချိန်နဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့မှာ မှတ်ပုံတင်မရှိပဲနဲ့ ဝန်ကြီးဌာနက ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ…
ရှင်းပါတယ်… အစိုးရက ဝင်ငွေခွန်မကောက်ပါဘူး… မှတ်ပုံတင်လာလုပ်ရင် ရတဲ့နှစ်ပဲတစ်ပြားကိုပဲ အခါပေါင်းများစွာယူပါတယ်…
ဖြစ်လာသမျှကို ဝန်ကြီးဌာနကလဲ ရှင်းမပေးပါဘူး…
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ခေတ်မမီတဲ့၊ စိတ်အနှောက်အယှက်များတဲ့အစိုးရရုံးများကိုမသွားချင်ပါဘူး…
ရုံးသွားရမှာကို ကြောက်ကြပါတယ်… အဲဒီအတွက် အလုပ်သမားတွေအကာကွယ်မရကြပါဘူး…
နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဥပဒေမှာ လူတစ်ယောက်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို ငွေသန်းချီပုံပေးပြီးခိုင်းရင်တောင်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ကိုယ်တိုင်တရားဥပဒေရဲ့ထီးအောက်မှာရှိနေပြီလားဆိုတာကို အရင်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်…
ထီးလုံတာမလုံတာကတော့ ထီးပိုင်ရှင်နဲ့သာဆိုင်ပြီး… ထီးအောက်ထဲကိုစနစ်တကျဝင်နေရမှာက ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်ပါတယ်…
အခုကိစ္စတွေကို ဥပဒေကြောင်းအရမဟုတ်ပဲ နားလည်သလိုရေးပြတာပါ…
ဥပဒေနဲ့သေချာညှိနှိုင်းတဲ့အခါ အယူအဆလွဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်… (ကျွန်တော်မှားနေတာဖြစ်မှာပါ)
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့လဲ ထီးအောက်ကိုဝင်ဖို့အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ…
ဘာလို.အဲလောက် မညှာမတာ လုပ်နေကြလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို.ကိုမရဘူး…..
အဲကြုံတုန်းပြောရအုံးမယ်……… ကျွန်တော်တို.ရဲ. ဘော်ဒါကြီးဦးမိုက်ကြီးကတော့ အလုပ်သမားတွေ ကို လစာဖြတ်ခိုင်းလို. ဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင်ထွက်စာတင်ထွက်လာခဲ့တယ်လို.သိခဲ့ရတယ်…. တကယ့်ကို စံပြလူကြီးပါပဲ…
ထွက်တာတောင်ရိုးရိုးမထွက်ပဲ… အလုပ်သမားတွေလစာဖြတ်မယ့်အစား သူ.ကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်ရင် အလုပ်သမားတွေလစာ ဖြတ်တဲ့ Amount လောက်သက်သာလိမ့်မယ်ဆိုပြီး စာရေးတင်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထွက်စာတင်ခဲ့တယ်တဲ့ လေ……….
အဲလို အလုပ်သမားတွေဘက်က ရပ်တည်ပြီး အလုပ်ပြုတ်ခံမယ့် အထက်လူကြီးမျိုး ကျွန်တော်တို.ဆီမှာ ဘယ်နှယောက်များရှိလဲမသိဘူးနော်……………….
ဦးကြီးမိုက် ကြီး သွေးနီပါပေ့ဗျာ…
အညတရ သူရဲကောင်းပါ …
ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ် ဟိုဒေါက်တာကြီးက ချစ်တာ
( အလုပ်ရှင်ကတော့ နည်းနည်းပေးရလေ ၊ သူ့အတွက်ကျန်လေပေါ့ ။ အလုပ်သမားကတော့ များများရဖို့သာ
အဓိကပေါ့ ။ )
ရေကြည်ရာမြက်နုရာ လို့ပြောမလား ငါးပွက်ရာငါးစာချတယ်လို့ပြောမလား
ရိုးရိုးကြည့်ရင် အလုပ်ကိုစလုပ်ကြကတည်းက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူကြလို့လုပ်တယ်ပြောရမှာဘဲ
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လုပ်သားတွေက နေ့တွက်မကိုက်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်လာတော့
( သူများစက်ရုံမှာ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ အသံကြားကတည်းက ထိုက်သင့်တဲ့ လုပ်အားခနဲ့
ပိတ်ရက်မျိုးတိုးပေးခြင်းအားဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါတယ် ။ )
ဒီလိုအစီစဉ်လေးတွေနဲ့ ကာကွယ်တာ ကောင်းပါတယ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ အလုပ်သမားတွေကို ကျိုတင်ရှင်းပြ အသိပညာတွေပေးတာကလည်း
သူများတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်မှာ စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီး ချောင်လို့ဂွင်တည့်လို့
ခုများ ဒီမိုကရေစီယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်ဖြစ်လာတော့
ဟိုကတည်းက စာရရုံလေးဖြစ်နေတာ သိပ်ကြည်နေကြတာမဟုတ်ဘူး
ခုလို မြှောက်ပေးတဲ့သတ္တဝါတွေဘာတွေရှိလာတော့ ထဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာ
ကိုယ့်လူတွေကလည်း ကြယ်သီးရရင် ကြယ်သီးခိုးမှာ အပ်ချည်တစ်လုံးလောက်ခိုးပြန်လာ
နည်းဒါမှတ်လို့ ထမီလေး ဘရာစီယာလေးပြန်ချုပ်လို့ရဒါဘော့နော
နေ ့စားအလုပ်သမားတွေရော၊စက်ရုံများမှ အလုပ်သမားများ၏
စားဝတ်နေရေးအခြေအနေကို ခေတ်ကာလနဲ ့လိုက်လျောညီထွေ
ဗမာပြည်ရွေ့လာတာက အဓိကအချက်က လုပ်ခသက်သာတယ်
နောက် ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ အင်ပို့ အိတ်စပို့ ပရိုဆီဂျာတွေက(ပေပါဝပ်)
ထုတ်လုပ်မှု့လုပ်ငန်းစပြန်တော့ ဟိုပစ္စည်းမပြည့်စုံလို့ ဒီပစ္စည်းလိုနေလို့
အချိန်မီပို့နိုင်ရေး တွန်းကြတော့တာဘဲ..အဲဒီတော့ အိုတီဆိုတာ
“မရှိမဖြစ်မိုး” လိုလုပ်ကြရပြန်တာပေါ့..မနက် ရနာရီကစလိုက်တဲ့
အလုပ်ဟာ ညနေ ၉နာရီဆိုတာအစောဆုံးဘဲ..
ကွန်တိန်နာထွက်ရက် မပီးလို့ကတော့ “အောနိုက်”ဆိုခေါ်ပီး
ထမင်းစီစဉ်ပေး ညလယ်စာဖန်တီးပေး နဲ့မောင်းလိုက်ကြတာ
အိုတီနဲ့ပေါင်းရင် ကျွမ်းကျင် စက်ချုပ်သမတစ်ဦးဆို အနဲဆုံး ရှစ်သောင်းလောက်ရတယ်..
ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ ဘာလူမှု့ဘဝအပန်းဖြေချိန်မှမရှိဘူး..စက်ရုပ်လိုဘဲ…
အလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်း အော်ဒါပေါ်မူတည်ပီး piece rate ကိုသတ်မှတ်ပေးရတာ
ပုံသေ နှုံးထားသပ်မှတ်ပီး နှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဘို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
ရေးရင်းနဲ့ လိုရင်းမရောက်တော့ဘူး ဒေါ်အီးတုံးရေ..နောက်မှ ရေးအုံးမယ်ဗျို့..
လိုက်ဘူး ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်ပါ…
ဆြာကျီးမိုက် အပေါ်မှာ ရွှေဒိုက်ဇိုး ပေါဒါဒဂယ်လား…။ ဟုတ်ခဲ့ရင် အဲဒီစက်ရုံနာမည်ပြောကွာ…။ အော်ဒါအပ်ပြီး အထည်တွေဂို တာလီဘန်ဒွေဆီဂို တိုက်ရိုက်ပို့ခိုင်းမယ် ပြီးဒေါ့မှ သဂျီးဂတဆင့် စီအိုင်အေကို သတင်းပို့မယ်…။
ကြောင်ဝလေး ပြောတာ လက်တွေ့ကျပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပျက်နေတဲ့ စနစ်ယန္တရား ကြီး ကို ချက်ခြင်းကောင်း သွားအောင် မလုပ်နိုင်တာမို့ တစ်ဆင့်ခြင်း ပေါ့။
ဒီတော့ တုံတုံ ပြောတဲ့ အခြေခံ အစ ဖြစ်တဲ့ မရှိမဖြစ် စာချုပ်စာတန်း တရားဝင် ရှိထား ရမှာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီ စာချုပ်နောက်မှာ မှ ဒီစာချုပ်ကိုဖောက်ဖျက် ခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ ဥပဒေ လမ်းကြောင်း ဖောက်ရပါမယ်။
ဒါက အစိုးရ ဝင်ပါရပါမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ပြည်သူလူထု အလုပ်သမား တွေကို အထူးကာကွယ် ပေးမှာလား။ အလုပ်ရှင် တွေကို ကာကွယ်မှာလား။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဘယ်ဥပဒေမှ မစိုးမိုး သေးတဲ့ ကာလ အဖြစ် ရှိနေဆဲပါဘဲ။
ဒါကို စောင့်နေလို့ ကတော့ လောလောဆယ်ပြသနာ တွေကို ရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ ဒီလို စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ တွေမှာ အလုပ်ခန့်တာနဲ့ အလုပ်သဘော သဘာဝ၊ လစာ ခံစားခွင့်၊ အလုပ်ချိန်၊ အပိုကြေး၊ လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက် အာမခံ စသဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူ စာချုပ် ရှိကို ရှိသင့်ပါတယ်။
ဒါမှ မဟုတ်ခဲ့ရင် တော့ အလုပ်သမားဘက်က နာကွက်တွေချည်း ဖြစ်မှာပါဘဲ။
အလုပ်ရှင် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သ၍ အမြတ်ရအောင် လုပ်ရမှာကိုး။
အဓိက အမြင်သာဆုံး စရိတ်လျှော့ တာက ပေးရတဲ့ လုပ်ခ မှာ မဟုတ်လား။
အခု အချိန်မှာတော့ ဒီလို တရားဝင် စာချုပ် စာတန်း မရှိဘဲ လစာတိုး ဖို့ ဆန္ဒပြနေတာ တွေဟာ နိုင်ငံတကာ အမြင်မှာ တရား ဝင်မယ် မထင်ဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အစ က ကိုယ်သဘောတူ လို့ ဒီလစာ နဲ့ လုပ်ဖို့ စပြီး လုပ်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။
အလုပ်မဝင်ခင် ပြောတဲ့ လစာကို အကြောင်းပြချက် တစ်ခု နဲ့ ပြန်လျှော့ ပေးတာ ဆိုရင်တော့ လဲ တစ်မျိုးပေါ့။
၅၀၀ဝ လောက်တန်တဲ့ အစိုးရအခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးပါတယ်… အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ လုံခြုံမှုဆိုတာလေးကိုပေးပြီး ကောင်းကောင်းခိုင်းစားပါ့မယ်…
လာကြပါ့မလား လျှပ်စစ်မီးမရှိ မြေဈေးကကြီး ဆက်သွယ်ရေးကမကောင်း
တီလုပ်မလေး ဒွေနဲ့ဘဲ …
psychological contract ချုပ်ပြီး
၃နှစ် ဝရံတီနဲ့ အားရပါးရ ခြစ်ချင်တာပဲသိတယ်…
နောက်တာပါ ဆုံသင်းတုံရေ ….
အူးပဒေ က မခိုင်မာလို့ ထိရောက်တဲ့ အကာအကွယ်..
အရံအတား အစောင့်အရှောက် … ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး ဆိုတာလေး
အခု ကိုကြောင်ဝတုတ် ပြောမှနားလည်တော့တယ်။
အလုပ်လက်မဲ့များတဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွက်တော့..။ လုပ်စားတော့မိုးခေါင် ခိုးစားတော့ခွေးဟောင်ဆိုသလိုပါပဲ။
အားလုံးဟာ လုပ်အားဆိုရင်လည်း ရနိုင်သမျှအကုန်ဖြစ်ညှစ်ထုတ်။ ဉာဏ်အားဆိုလည်း တတ်နိုင်တာ
ထက်ပိုလိုချင်ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို တာဝန် ၃၊ ၄ ခုလောက်ခိုင်းချင်တာပါ။
ထင်မြင်ချက်လေးပါ။ နားမလည်သေးတာတွေ ဒီပို့စ်ရဲ့ မန့်တွေကနေသိရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။
comment ပေးဆွေးနွေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. မတူတဲ့ ထောင့်မျိုးစုံက အတွေးစုံကိုလည်း သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ ပို့ထက်ကိုပိုပြီး မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ ကော့မန် ့မျိုးအတွက် .. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို ့ဝိုင်းအုန်းစားထားကြတာပါဘဲ ။ ပို ့စ်တစ်ခုအနေနဲ ့တင်မက ၊ ကွန်မင့်တွေပါ အားလုံးကူးပြီး ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန ကို ဖတ်ဖို ့ပေးပို ့ပေးမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာပါမယ်။
အဲတော့ အလုပ်တစ်ခုရဘို့အတွက် အလုပ်လိုချင်သူတွေမှာ အသဲအသန်ရုန်းကန်ကြရပါတယ်။.
ခေါ်မှာက 5နေရာ လျောက်ထားတာကလူ2000.
အဲဒီအထဲကမှ အရွေးခံရတယ်ဆိုတာနဲ့ဝမ်းတွေသာပြီး ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်က ဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုတောင်
အဲတော့ အလုပ်ရှင်က စီးပိုးတတ်တယ်ဆိုရင် စကတည်းက ဝန်ထမ်းမှာတပန်းရှုံးပြီးသား။
အလုပ်ထဲလဲရောက်ရော ဝန်ထမ်းက နေချင်သလိုနေရော။
( နောက်ဆိုလျှင် အင်း ၊ ဟုတ်ပါ့ ၊ ဒါပေ့ါ ဆိုတာမျိုးရေးထားတဲ့ အလွန်တိုပြီး ၊ ဆွေးနွေးမှု မပါသော ကော့မန့်ကို ဖျက်ပါမယ် …… ပုံ/စာရေးသူ )
လက်ရှိအလုပ်ရှင်တော်တော်များများက အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်တာကို စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ လုပ်ခလစာပေါပေါနဲ့ ခိုင်းလို့ရမယ့်လူလောက်ကိုသာ စိတ်ဝင်စားနေကြတာ။
eipu ရေ .. ပြောချင်တာကတော့ … ဒါပါ … အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနရှိပါလျှက် …. အလုပ်သမားတွေကို အပြည့်ဝ ကာကွယ်ပေးသလား ၊ လုံခြုံမှု အပြည့်ဝပေးနိုင်သလား ၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ရှင်တွေပေးတဲ့ တံစိုးလက်ဆောင်တွေနဲ့ပဲ မျက်စိမှိတ်နေသလားဆိုတာ …. သိချင်စိတ်ပြင်းပျမိပါတယ် ။
ကျွန်မမျှော်လင့်တာကတော့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဆိုတာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အရေးကို အလုပ်သမားတွေဘက်က အမှန်တိုင်း ဖြေရှင်းပေးမယ့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်စေချင်တာပါပဲ ။
ပြင်ပပုဂ္ဂိလက လုပ်ငန်းတွေများတဲ့ ကျနော်တို့မန်းလေးမှာဆိုရင် ဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်တဲ့အခါ
အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ပါတယ် မပါဘူး ကို ထည့်ပြောမရှိပါဘူး။
ပါသည် ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ ခန့်သင့်ရင်ခန့်လိုက်တာပါဘဲ.
အဲဒီရုံးကို သွားဘို့ စိတ်မကူးကြပါဘူး။
ဒါကိုထောက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီရုံးက အလုပ်သမားလူတန်းစားအတွက် အသုံးမဝင် အကျိုးမပြုနိုင်လို့လား။
ဒါမှာမဟုတ် သူ့အသုံးဝင်တာကို ကျနော်တို့ကအသုံးမချတတ်တာလား စဉ်းစားစရာပါဘဲ။
လေးပေါက်ရေ .. အစိုးရအလုပ်တော့ တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် … ကြားဖူးနားဝရှိတာကိုက ..အစိုးရအလုပ်က ဖြုတ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး ။ အထက်လူကြီးက ပုဂိ္ဂုလ်ရေးဆန်ဆန် စကားမျိုးပြောပြီး နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ဖို့(အာဏာရှင်ရုံးမပါ ) အခွင့်ရေးသိပ်မရှိကြပါဘူး … ။ ဒါ့ပြင် အလျှော်စား ကိစ္စလည်း မရှိပါဘူး ။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုက .. အပြင်အလုပ်တွေလောက်မရှိဘူး (ချွင်းချက်အနေနဲ့တော့ တချို့သော ရုံးဌာနတွေမှာ ဘေးကြပ်နံကြပ်ဘုကလန့် လူမျိုးက အထက် လူကြီးဖြစ်နေလို့ ဂွကျရတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ရှိတာပေါ့ ) ။ သူတို့ ရဲ့ အလုပ်ခန့်စာ ၊ ထွက်စာက ဝန်ကြီးဆီကိုပဲ တိုက်ရိုက် တင်ပြီးရတာမျိုးပေါ့လေ … ။ ရာထူးအတွက် စာမေးပွဲတွေဖြေရတာမျိုး ၊ စာရွက်စာတမ်းအရတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြီး အလုပ်လျှောက်ရတာမျိုးတော့ ရှိတယ်။
အပြင်အလုပ်ကျတော့ … ဒ ီတိုင်း အပြင်လူသွားလျှောက်တာထက် .. နီးစပ်ရာကို ခေါ်ခန့်တာများတယ် ။ တစ်ချို့သော အလုပ်တွေက အလုပ်သမားထောက်ခံစာတောင်းတယ် ၊ တစ်ချို့တွေကလည်း ခင်ရာမင်ရာ ထည့်ပေးတာဆိုတော့ ဘာစာရွက်မှ မလိုပဲ စီဗွီတောင် ရုံးရောက်မှ ကောက်ဖြည့်တာမျိုးပေါ့ … ။ ပြောရလျှင်လေ … အလုပ်သမားရုံးကိုသွားပြီး ထောက်ခံစာ လုပ်ရတဲ့ စာရွက်တစ်ခု အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ လိုအပ်သင့်တယ် ။ ဒါ့ပြင် ဒီစာရွက်ရဲ့ အရေးပါပုံကိုလည်း ကိုင်ဆောင်မယ့် အလုပ်သမားက သိသင့်တယ် ။ အခုတော့ ထောက်ခံစာသာ သွားလုပ်တာ … ဒီစာရွက်က ဘာလုပ်လို့ ရမှန်းလည်း မသိ …အလုပ်ဝင်မယ့်ဆီကိုပေးပြီး ပြီးရော ဆိုတာလောက်ပဲ နားလည်ကြတယ် ။ ကိုကြောင်ဖတ် မပြောခင်ကအထိ … ရုံးကို တစ်ခေါက်ပြန်သွားရမယ်ဆိုတာမျိုး နားမလည်ခဲ့ဘူး ။
နောက်တစ်ခုကလေ .. အလုပ်သမား အခွင့်ရေးနဲ့ ဥပဒေစာအုပ်တွေ … ရှိမှန်း မသိတဲ့ လူတွေရှိသလို ၊ ရှိတာသိလျှင်လည်း ဘယ်မှာ ရှာဖတ်ရမှန်း မသိတဲ့ လူတွေရှိတာ … ။ အဲ့ဒါမျိုးကို အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ … ကုမ္ပဏီတွေကို ဘိုင်ဖို့စ်ပေးပြီး သက်သက်သာသာဈေးနဲ့ ရောင်းသင့်တယ် ။ (ကျွန်မအတွေးပါ) အလုပ်စဝင်တဲ့အခါမှသာ မဖြစ်မနေ စာအုပ်ကို အလုပ်သမားဆီ(လပေးဖြစ်ဖြစ် ၊ အရစ်ကျခွဲပေးစန်စနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ) ရာင်းချစေသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ အလေးအနက်ထားရေးတဲ့ပို့စ်မှာ အလေးအနက်ထားပြီး
ဒီလိုပိုစ်မျိုးမှာ ပေါကြောင်ကြောင်ရေးတဲ့ ကော်မင်းပိုင်ရှင်ကလဲ သူ့တန်ဘိုးသူဖြတ်တယ်လို့ခံယူပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် ကော်မင်းပေးတာနဲ့မလုံလောက်ဘူးထင်ရင် (သဘောတူသည်ဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ )သီးသန့်တပုဒ်ထပ်ရေးပေးတတ်ကြတာ ထုံးစံပါဘဲ။
လေးဘလက်ရေ … အခုမှ သတိရလိုက်မိတယ် … ။
အရင်က လေးဘလက်ရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုမှာ အစက်လေးတွေချပြီးရေးတာကို … ဖတ်ရတဲ့လူစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းစေနိုင်လို့ အစက်လေးတွေ မချဖို့ ပြောတာ … မှတ်မိနေသေးတယ် ။
အခု ဒီပို့စ်ရေးတုန်းက လေးဘလက်ပြောတာ သတိရမိလို့ ….. အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းပြီး အစက်မချပဲရေးခဲ့တဲ့ … ပထမဆုံး ပို့စ်ပါပဲ … ။ အကြံပေးခဲ့တာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး သိတ်လည်း မကျွမ်းကျင်တာနဲ့ ဝင်မဆွေးနွေးပဲ
ကျွန်တော်လည်း သူများကို ပြောမိတာ ဝဋ် လည်နေပြီဗျာ…။
အဲဒီအစက်လေးတွေချတဲ့ အကျင့်ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရနေပြီ အီးတုန်းရေ…။
အစက်ချတာ ပျောက်တဲ့လူက ပျောက်မှ အစက်ချတာ အကျင့်ပါတဲ့လူကပါ
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှာ လေးပေါက်ကိုယ်တိုင် ငယ်ငယ်ကတည်းကအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ဘူးပါတယ်။
ဥပဒေကတော့ ရှိပါတယ် ။
ကျနော်တို့က အသုံးမချတတ် သိလဲ မသိ ဆိုတော့
လေးပေါက်ရေ … အလုပ်ဝင်တော့ … သမီးလည်း မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ် ။
မကြာသေးခင်ကမှ ..ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ အဲ့ဌာနကို ရောက်သွားတော့ … သူတို့ပြောတဲ့ စကားအသွားလာကို နည်းနည်းမနှစ်မျို့ဘူး …. ။ အလုပ်သမားအရေးဖြေရှင်းတာထက် ..စက်ရုံသူဌေးတွေစိတ်ခုမှာ ကြောက်နေပုံပဲ … (စိတ်ထင်တာပါ ) ဒါဆို ခင်ဗျားတို့ အလုပ်က ဘာလဲလို့ မေးချင်တာမှ ပါးစပ်ကို မနည်းထိန်းထားရတယ် …. ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ဟုတ်မဟုတ်ကာယကံရှင်တွေပဲ သိပါလိမ့်မယ် … သမီးကတော့ … စိတ်ထင်တာကို ရေးချလိုက်တာ ။
ဖြစ်သင့်တာကတော့အလုပ်ရှင် နဲ့အလုပ်သမား ဆွေးနွေးပြီးတော့ နှစ်ဦးသဘောတူ အလုပ်လုပ်ရခြင်းသည် သာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် တိုးတက်မယ့် လမ်းတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ် လို့စနိုးအမြင်လေးကိုပြောပြခြင်းပါ…